Ulahla njani amakhalane kwinja yakho
Amakhalane ziindaba ezimbi: ahambisa izifo ezininzi ezinokubangela ukugula kakhulu kunye nokufa kuzo zombini izinja nabantu, ke ukugcina inja yakho ingakhange ikhathaze yeyona nto iphambili.
Amanani amakhulu amaqanda amakhalane aqandusela entwasahlobo nganye, kwaye amakhalane amancinci akhwela engceni nakwezinye izityalo. Oonokrwece babo abancangathi babanceda ukuba babambelele kwizilwanyana ezidlulayo, kubandakanya inja yakho yezilwanyana enomdla.
Amakhalane akhawulezisa ukwehla ezantsi kweenwele, ancamathele kulusu, kwaye aqale ukuncancisa igazi, kuphela kukuyeka iiyure okanye iintsuku kamva xa zidityiwe. Okwangoku, naziphi na ii-microorganisms ezazikhwela ukukhwela ngaphakathi kwesi sihambisi sezinambuzane zigqithiselwa kwinja yakho ngomlomo wamakhalane.
Ukugcina inja yakho ikhululekile kumakhalane kangangoko kunokwenzeka yeyona nto ikhuselekileyo ukubheja- hayi eyakho inja kuphela, kodwa nawe ngokunjalo. Nazi ezinye iingcebiso zokuthintela amakhalane:
Ngexesha leethikhi (ngo-Epreli ukuya kuSeptemba), nciphisa ukubonakaliswa kwenja yakho kwiindawo ezaziwayo ezinamakhalane. Amakhalane ahlala ezifihla engceni ende nakwingca eshinyeneyo.
Sebenzisa uphawu lokukhusela kwinyanga yasentwasahlobo nasehlotyeni. Iimveliso ezininzi kwintengiso zibulala iintakumba kunye namakhalane (kwaye kutheni ungazikhangeli zombini ngaxeshanye?). Unokufaka le mveliso inyanga nenyanga kulusu lwasemva kwentamo yenja yakho. Buza ugqirha wezilwanyana ukuba akucebise ngeyona mveliso isebenzayo yenja yakho.
Vavanya inja yakho xa unamakhalane mihla le ngexesha lokudla kwamakhalane. Ukuba ukrokrela ukuba ebedlala kwindawo eneentakumba, mvavanye ukuba akunakunyusa amakhalane kwangoko. Qiniseka ukuba ujonga ngaphakathi nangasemva kweendlebe zakhe nangaphaya kwamehlo akhe, zonke iindawo zokuzonwabisa zokukhathaza.
Ukususa uphawu, landela la manyathelo:
Sebenzisa ii-tweezers ukuze ubambe intloko yethiki apho incamathela kulusu.
Nxiba iiglavu ukuba ucwangcisa ukusebenzisa iminwe yakho ukususa uphawu lokukorekisha.
Tsala uphawu lokukorekisha ngobunono nangokuzinzileyo. Ukuba uyayikhupha ngokukhawuleza inja yakho, uya kushiya inxalenye yomlomo wekhalane ngasemva, enokubangela usulelo.
Malunga nemizuzwana engama-20 ukuya kwengama-30, umlomo wokhalane uyakukhulula ukubamba kwawo kwaye uphawu lokukhupha luya kuphuma lucocekile.
Dab ezinye izibulali-zintsholongwane kwinja yakho kwindawo elunyiweyo, ulumke kakhulu ukuba ukujikeleze kwamehlo enja yakho.
Bulala uphawu lokukorekisha ngokubeka etywaleni.
Gcina uphawu lokufa kwingxowa yeplastiki enokuphinda ithengiswe kwakhona, ibhalwe nomhla efunyenwe ngawo elo khalane.
Oku kunokuvakala kungaqhelekanga, kodwa ukuba inja yakho iyagula, kungafuneka uchonge iintlobo zekhalane ezilumkileyo.
Ungaze ulisuse uphawu lokukorekisha ngezandla zakho, kwaye ungaze ulityumze itiki phakathi kweminwe yakho. Ukuba uyakwenza oko, uzibeka emngciphekweni wokufumana isifo seLyme okanye esinye sezifo ezithwalwa ngamakhalane.
Ukuba inja yakho iyagula kwaye usandula ukufumana uphawu kuyo, khangela ingqalelo yezilwanyana kwangoko. Uninzi lwezifo ezithwalwa ngamakhalane zinokunyangwa ngempumelelo ukuba ngaba isifo senziwe kwangoko kwaye kuqalwe ngonyango olufanelekileyo. Ukuba izinto ezihanjiswa ngamakhalane zivunyelwe ukuba zifumane indawo, nangona kunjalo, ezi bugs ezimbi zinokubangela ukugula kakhulu okanye nokufa.
iqhuma elinzima phantsi kotyando emva kotyando
iziphumo ebezingalindelekanga ze-atenolol 50mg
I-ondansetron odt 4 mg
Amaxabiso e-luma cream amathathu
Isilinganiselo esingcwele se-basil soxinzelelo
ukuseta uthungelwano lwasekhaya windows 10